Vamwe vakuru mubazi rezvehutano vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti pane akafukura hapwa kuvatori venhau akaburitsa nyaya yekuti Zimbabwe Anti Coruption Commission kana kuti ZACC yatanga kuferefeta mutevedzeri wegurukota rezvehutano Dr John Mangwiro avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvehuori. VaMangwiro vanonzi vanogona kusungwa chero nguva.
VaMangwiro vanonzi vakaita zvehuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 5,6 million kuburikidza nekambani yeYoung Healthcare Limited yavanonzi vaimanikidzira mamwe makambani ehurumende kuti atenge zvinhu kubva kwairi zvine chikiribidi mukati.
Mari iyi yaida kutengeswa zvikwanisiro zvekurwisa Covid-19. Hatina kukwanisa kubata VaMangwiro sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa. Asi mutauriri weZACC VaJohn Makamure vati havana chekutaura nezvenyaya iyi parizvino.
Vaimbova gurukota rezvehutano VaObadiah Moyo vakatodzingwa basa nenyaya yehuori yavari kupomerwa yakapinzawo mumambure ayo mhuri yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangangwa iyo iri kuramba mhosva iyi.
Vanoona nezvemabasa musangano rinoona nezvehuori kuchamhembe kweAfrica reAnti Corruption Trust of Southern Africa VaAlois Chaumba vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vanenge vabatwa nemhosva havamanikidzwe kudzora mari idambudziko guru rinopa kuti vanhu vafunge kuti hurumende haina kuzvipira kurwisa huori.